रेणुको दा’बी,- अबको प्रधानमन्त्री मेरो बुवा ! (भिडियो सहित) « Dhankuta Khabar
रेणुको दा’बी,- अबको प्रधानमन्त्री मेरो बुवा ! (भिडियो सहित)
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले अब आफ्ना बुवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरेकी छिन् । शनिबार राति प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ मा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।